PetrPikora.com on Jona 10, 2018
Valdstein (Waldstein) dia rava ao amin'ny distrikan'i Semily akaikin'i Turnov, ao amin'ny faritr'i Bohemian Paradise. Ny tranon'ireo tompon'ny Valdštejn dia avy amin'ny tapany faharoa amin'ny 13. taonjato. Io no iray amin'ireo trano lehibe indrindra ao amin'io faritra io.
Ny tranobe dia nanamboatra ny iray amin'ireo sampan'ny fianakaviana Markvartic tamin'ny taona 1260 ka hatramin'ny 1280. Izany angamba avy Jaroslav Hruštice na zanany Zdenek Wallenstein ary avy eo dia tonga ny fianakaviany fonenana, araka izay sy ny taranany nampiasa ny enti-andrianan'ny Wallenstein. Izy ireo dia nantsoina hoe Wallenstein.
Jaroslav from Hruštice (Hruštice tanàna mimanda tao Turnova) nampiasa voalohany ny anaran 'i Jaroslav Lemberka satria mpikambana ao amin'ny fianakaviana LEMBERK, ny fahatelo zanak'i Havel avy Lemberk. Havel ny Lemberk tonga avy tany Markvartic iza no nandresy tany amin'ny faritra avaratr'i Bohemia, faritra lehibe ho an'ny fanampiana Pfemyslids. Ny renin'i Jaroslav dia Zdislava avy ao Lemberk, nankalazaina tao amin'ny 1995.
Wallenstein dia nijanona nandritra ny taona 100. Ohatra. Fantatro Zdeněk ny Wallenstein, ny tandapa ny Mpanjaka Jean de Luxembourg, Hynek ny Wallenstein, izay any 1336 nandray anjara tamin'ny fanafihana ara-miaramila ho any Litoania Czech Mpanjaka sy John of Wallenstein, izay nampindrana 1500 groschens Margrave Charles, taty aoriana Mpanjaka Charles IV.
Any amin'ny faran'ny 14. tranon'ny fianakaviana Vartenberg, izay anisan'ny fianakaviana Markvartic ihany koa. Miaraka Henry ny nanapa-kevitra ny hanorim-ponenana Wartenberg ny faktiora mpitarika Hussite Jan Zizka ny Trocnov, izay 1424 lohataona tonga ny miaramila ny Turnovo, dia naharesy azy, diso ny monasitera, ary nandresy ny Wallenstein. Avy eo izy nilaza ny toa Valečov, ny namany, izay nigadra noho ny Prince 1427 Sigismund Korybutovič, kandidà ho an'ny seza fiandrianana. Ao amin'ny 1431 dia mpanohana iray hafa ny Hussites Castle Ramesh fisaraham-panambadiana avy amin'ny Stakory (dia ny Hradek).
Tamin'ny taona 1438-1439 ny lapa (sy ny tanàna teo akaiky teo Kavčiny) nosamboriny andian-jiolahy jiolahy ka noho izany na any 1440 Nandresy-paritany vola. Nanohy ny fanavaozana ny tompony. Niaina teto Šofové ny Helfenburk hatramin'ny 1514 Smiřičtí ny Smiřic. Nandritra ny taona 1550 dia niorina tamin'ny afo ny lavaka.
Any amin'ny faran'ny 17. taonjato mpitoka-monina irery nanorim-ponenana tany ny sisa tavela amin'i Vaclav Holan Rovenský nanomboka teto sy hiaina mpanao fivahiniana masina isan-karazany. Ny tompon'ny fananana eo an-toerana Wallenstein (tompon'ny taona 1620-1821) sy hanaraka azy Aehrenthalové (1821-1945) naorina avy amin'ny sisan-javatra rava ny tantaram-pitiavana fivahinianana masina. Ao amin'ny vato nanameloka 1713 dingana 1722 no voalohany nanao trano fiangonana kianja. John ny Nepomuk, ary tsy ela taorian'ny maro 1817 sarivongan'i St. Chapel tamin'izany. Jaona Mpanao Batisa. Tao amin'ny 1836, nisy vavahady fidirana iray naorina teo aorina teo amina tetezana vato, misy sarivongana maromaro.
Ny fianakaviana Čihulkov dia nanana trano fisakafoanana tao amin'ny tranobe 1923 ka hatramin'ny 1949. Avy eo dia tafiditra tao amin'ny ekipan'ny Sokol izy io. Hatramin'ny Ady Lehibe II, ny foibe midadasika.
Ny fanimbana dia azo amidy eny an-tongotra eo amin'ilay famantarana famantarana maitso sy mena, ny manodidina ny fiara dia manodidina ny 1 km. Avy any Turnov, ao amin'ny faritanin'i Mašov eo akaikin'i Turnov, ilay tranobe dia hita ao amin'ny 3 km jjv lavitra. tari-dalana. Ny fitsangatsanganana dia azo atao mandritra ny vanim-potoana, miaraka amin'ny saram-pidirana. Ny faharavana dia metatra 389, ny metatra dia metatra 90. Ny toby natiora Hruboskalsko dia hita any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny lapa.
Hrad se německy nazýval Waldenstein, v českém překladu tedy Vato fotsy.
Obraz světce v kapličce je možná jedinou existující podobiznou Karla Hynka Máchy. Ny mpanoratra ny sary hosodoko 1836 dia Frantisek Mašek (Maschek, 1790-1862).
Na Valdštejně složil skladatel Josef Bohuslav Foerster oratorium Anarana. Václav a Fifth Symphony.
Czech ParadisahradValdštejn CastleWallensteinsisa tavela
10 famantaranandro lasa izay